Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Qalabka ugu Fiican Polaris Ranger
Polaris Rangers -ka ayaa ah magaca ugu weyn ee suuqa adeegsiga, iyo u xulashada qalabka iyaga ayaa noqon kara mid aad u dhib badan.
Weli, waxaa jira agabyo kala duwan oo suuqa gadaashiisa laga heli karo oo leh tafaariiqleyaal baaxad leh.
Waxaa intaa dheer, waxaa jira noocyo kale duwan oo kale oo laga heli karo ilaaliyaha Polaris.
Markaa, waxaad heli doontaa xulashooyin badan oo aad ku habayn karto gaadhigaaga oo aad ugu habayn lahayd baahidaada.
Waa kuwan agabyada ilaaliya Polaris ugu fiican ee la heli karo si aad ugu raaxaysato raacitaanka.
Taayirada Iyo Giraanyada
Markaad baabuur ku waddo dhul qallafsan, taayirada Polaris Ranger -ku waxay ka ciyaaraan door muhiim ah. Waxay bixiyaan waayo-aragnimo weyn oo ammaan ah oo ka baxsan waddada waana mid aad u waarta. Waxay ka caawisaa kor u qaadista waxqabadka ilaaliyayaasha marka aad ku waddo dhul adag. Waxay si fiican ugu habboon tahay baabuurka waxayna dhiirrigelisaa inay bixiso waxqabadka ugu wanaagsan.
Qaybta dambe waxay kaa caawineysaa in aad ku dhejiso shaabad adag dhagaxa oo kaa ilaaliso boodhka inta aad ku jirto jidka. Markaad haysato oo kaliya muraayad -dabaysha oo aan lahayn muraayado gadaal ah, boodhka iyo wasakhdu waxay u muuqdaan inay xagga dambe ka soo galayaan kabka xoog xoog leh. Markaa, waa lama huraan in la sii wanaajiyo Polaris Ranger -kaaga adigoo rakibaya guddi gadaal ah.
Haddii aad rabto raaxada ugu dambaysa intaad fuushan tahay, markaa waa inaad hubisaa inaad ku rakibto kuleyliyaha kabka. Nidaamkani waa ikhtiyaarka ugu fiican xilliyada qaarkood sida dayrta iyo jiilaalka. Sidoo kale, waxay la yimaadaan dhowr kuleyliyaha iyo xirmooyinka barafka si ay u kala doortaan. Waxay kaa caawineysaa xakamaynta cimilada gudaha kabka waxayna kugu haysaa diirimaad maalmaha jiilaalka qabow. Waxa kale oo ku jira marooyin lagu hago muraayadda oo ka caawiya ka ilaalinta muraayadda hore ee barafka maalin qabow.
Isagoo intaas ku daray Polaris Ranger Albaabada, waxaad kordhisaa ka-hortagga walxaha ka baxsan waddada sida wasakhda, boodhka, hoos u dhig heerarka qaylada gudaha, waxaadna ku raaxaysan kartaa waayo-aragnimo raaxo leh. Si kastaba ha ahaatee, qof kasta oo fuushan wuxuu jecel yahay nooc kale oo albaab ah. Sidoo kale, rakibidda Albaabada Polaris Ranger waa wax iska fudud. Albaabada poly, tusaale ahaan, ka ilaali roobka ilaaliyahaaga, barafka, wasakhda, iyo qashinka. Sidoo kale, albaabka shiraacda waxaa lagu sameeyaa maaddada vinyl-ka ilaalisa UV. Waxaad sidoo kale u dooran kartaa albaabada aluminium Polaris Ranger. Waxay kaa caawin doonaan ka ilaalinta wasakhda iyo quruuruxa iyo joogtaynta waayo-aragnimada wadista hawada furan.
Waa lama huraan in la qaado xoogaa xoojin ah nooc kasta oo degdeg ah. Xagasha barafku aad bay ugu anfacaysaa xaalado dhawr ah. Tusaale ahaan, haddii wadadu dhiiqo roobka, waxaad horay u jabin kartaa naftaada. Sidoo kale, haddii ilaaliyahaagu uu jabay, baabuur kale ayaa hore u soo jiidi doona ilaaliyaha isaga oo isticmaalaya winch -ka.
Ku fuulidda Polaris Ranger -gaaga cimilada xun waxay u baahan doontaa saqaf waara oo madaxaaga saaran. Intaa waxaa dheer, waxaad kor u qaadi kartaa khibradaada ilaaliyaha maadaama ay jiraan xulashooyin kala duwan oo la heli karo sida poly, steel, iyo shiraac.
Waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay Polaris Ranger, laakiin waxaad ku qaadan kartaa waayo-aragnimadaada hal heer adiga oo adeegsanaya qalabkan heerka sare ah. Waxay sii wanaajin doontaa raaxadaada waxayna ku siin doontaa raacitaan fudud.